Midha-dhalka Socdaaladii madaxweynaha DDSI iyo Madaxweynaha oo Maanta Dib ugu soo laabtay magaalada jigjiga. - Cakaara News
Jigjiga(cakaaraNews) Khamiis Sept 12,2013.Shaki kuma jiro in 3dii sano ee ugu danbaysay Deegaanku ku talaabsaday Horumar baaxad wayn,nabadii oo saldhigtay,maamul-suuban oo hantay adeegii shacabka iyo kobac dhaqaale oo Gabi ahaanba DFI iyo 9ka ismaamul-deegaanba muunad ku dayasho mudan u noqotay halka beesha caalamkuna ku hamiyayso Horumarinta iyo maalgashiga DDSI iyadoona xukuumada maanta jirtaa albaabada maalgashiga deegaanka u furtay Cid kasta oo danaynaysa maalgashiga DDSI soona marta Hanaanka Sharciga ah in gacan lagu siinayo.
Dhanka kale madaxweynaha DDSI oo dhawrkii todobaad ee tegay Socdaalo hawleed ugu maqnaa cariga shiinaha iyo Dubai ayaa Yididiilooyin fiican oo waxtar aad u wayn u leh Meertooyinka Nolosha Shacabka iyo La dagaalanka saboolnimada iyo sugida Damaanada Cuntada ku tilmaamay in ay ku soo dhamaadeen socdaaladii wakhti dhawna ka hirgali doonaan deegaanka sida bariiska oo Goday laga beeri doono,Cudbiga ama suufka iyo warshada Sonkorta.
Madaxweynaha DDSI ayaa ku soo hakaday addis-ababa kana soo qaybgala Shirkii taariikhda abid soo mara Deegaanka soomaalida itoobiya ee lagu yaqiinsaday isbedelada xawliga ah ee 3sano gudahood ka taabo-galay iyo Diiwaanka aan duugoobin ee qowmiyada soomaalida itoobiya taariikhda iyo dhaqanka ay leedahay.
Hadaba maanta ayuu madaxweynaha DDSI Mudane Cabdi maxamuud Cumar uu dib ugu soo laabtay magaalada jigjiga isagoona salaan sharaf kaga qaatay Gagida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Garaad Wiil-waal Madaxda sar-sare ee DDSI,Hogaaminta Dhaqanka,Qaybaha Salaan-sharafta iyo Kooxaha Fanka.
isku soo wada xayn-daaboo Madaxweynaha ayaa Durba galay Xafiiska sidoo kalana gudagalay fulinta waajibaadkii shaqo ee uu u hayay Umada warbixina ka qaatay madaxweyne kuxigeenka DDSI ahna hogaanka n/galyada iyo cadaalada oo xilka xafiiska madaxweynaha loo sii idmay intuu socdaalada dibadeed ku maqnaa madaxweynuhu.